स्तन, गर्भाशयको क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रम - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
स्तन, गर्भाशयको क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रम
स्तन क्यान्सर २० वर्ष माथिका महिलालाई हुन सक्ने भएकाले २० वर्ष कटेकाहरुले घरमै सेल्फ इक्जामिनेसन विधि अपनाउनु आवश्यक छ । महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिनपछि आफ्नो स्तन र काँखीमुनी आफैंले छामेर अनावश्यक गाँठागुँठी भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । समयमै पत्ता लागेर उपचार भएमा क्यान्सर रोग निको हुन्छ ।
अक्टोबर महिनालाई क्यान्सर अवेयरनेस महिनाको रुपमा लिइन्छ । क्यान्सरको जोखिम कम गर्न अक्टोबर महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम र जागरण अभियान चलाइयो । सोही असरमा एक–एक पाइला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रले आस्मान सँग मिलेर स्तन तथा गर्भाशयको क्यान्सर स्क्रिनिङसम्बन्धी १ दिने स्वास्थ्य शिविर आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सपना वैद्य मल्ल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ रश्मी पुन तथा ब्रेस्ट अंको सर्जन डा. ज्योति रायमाझीले बिरामी जाँच तथा परामर्श गरेका थिए । शिविरमा स्तन तथा गर्भाशयको क्यान्सरबारे निःशुल्क परामर्श, भिडियो एक्सरे र सहुलियत दरमा ल्याब परीक्षण औषधि उपलब्ध गराइएको थियो । यो कार्यक्रमले केही हदसम्म भएपनि महिलालाई क्यान्सर रोग लाग्न नदिन फाइदा पुगेको ब्रेस्ट अंको सर्जन डा. ज्योति रायमाझीले बताइन् । विश्वमा महिलामा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा छ भने नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरपछि यो दोस्रो नम्बरमा आउँछ ।
असार २, २०७९ - ‘सम्मानित महिनावारी’ बारे कार्यक्रम
चैत्र ४, २०७८ - साहित्यमा लैंगिकता र सांस्कृतिक पत्रकारितासम्बन्धी कार्यक्रम
माघ १६, २०७८ - पाठेघरको मुखको क्यान्सर
कार्तिक २, २०७८ - समयमै उपचार : स्तन क्यान्सरको निदान